किरण गजमेर : देश खोज्दै गुञ्जिरहेको आवाज… — Breaking News, Headlines & Multimedia
तारा श्रीष मगर : जो परिवारको गर्जो टार्न गायिका बनिन्
संगीत : नेपाली भाइचारा बढाउने शक्ति
कति रात भोकै सुतेर त कति दिन खाली खुट्टा हिडेर किरण गजमेरले १४ बर्ष झापाको शरणार्थी शिविरमा बिताए । न उनी आफूलाई गर्वका साथ नेपाली भन्न सक्थे न त भुटानी नै ।
‘रातको चन्द्रमालाई’ बोलको गीत गाएपछि सार्बजनिक ध्यानाकर्षको पात्र बनिसकेका किरणले यसबीचमा ‘राधा’, ‘साढे सात’ लगायत चलचित्रमा पनि गाए । इमेज, कालिका एफएम लगायत चर्चित अवार्डहरु पाए ।
‘भ्वाइस अफ नेपाल’को ब्लाइन्ड अडिसनमा उनले ‘देखेर तिमीलाई’ बोलको गीत गाए । त्यसपछि पाएको प्रशंसा र साथले आफुलाई धेरै उत्साहि बनाएको उनी बताउँछन् ।
‘अहिले विश्वका हरेक ठाउँमा नेपाल छ । संसारभरका नेपाली भाषीको आवाज बन्ने मेरो उद्देश्य हो’, उनी भन्छन्, ‘हामी एउटै नेपाल आमाका सन्तती हौं । मैले नेपाली भाइचारा बढाउने शक्ति संगीतमा पाएको छु । त्यसैको लागि अहिले ‘भ्वाइस अफ नेपाल’को स्टेजमा आएको हुँ । ’
‘विदेशी हो, विदेशमै भाग्छ !’
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ यात्रामा किरणले आरोपहरु पनि खेप्न परेको छन् । उनलाई ‘विदेशी हो, विदेश भागिहाल्छ नि’ भन्दै खसाल्नेहरु पनि छन् । तर, उनी भन्छन्, ‘संगीतको माध्यमबाट नेपाली भाषा–संस्कृतीको सेवा गर्नु, नेपाली भाइचार बढाउनु मेरो सपना हो । यो सपनाबाट म कहिल्यै विचलित हुन्न ।’
किरण ‘भ्वाइस अफ नेपाल’कै लागि आठमहिनादेखि नेपालमा छन् । लगातार यती लामो समय नेपाल बसेको मुल्य आफुले अमेरिकामा चुकाइरहेको उनी बताउँछन् । यो अवस्थामा ‘यो विदेशी हो, विदेशमै भाग्छ’ भन्नेजस्ता कुरा सुन्दा स्वभाविक रुपमा दुःख लाग्ने गरेको उनी सुनाउँछन् ।
तर, लामो यात्रा गर्न चाहने यात्रीले बाटोमा थुप्रै हण्डर सहनुपर्ने कुरा उनले बुझेका छन् । यात्राको सुरुतिरैको हण्डरबाट थकान महशुश गर्नेवाला देखिदैनन् किरण । ‘फजुल आरोप लाग्दा दुःख त लाग्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, मैले त्यस्तो सोच र आरोपलाई गलत साबित गर्ने हो ।’
‘भ्वाइस अफ नेपाल’मा सहभागी हुनुपूर्व उनले कर्णराज कार्कीसँग तालिम लिएका थिए । उनलाई ब्लाइन्ड अडिसनमा ‘देखेर तिमीलाई…’ गाउन लगाउने कर्ण नै थिए । यसक्रममा धेरै प्राविधिक कुरा पनि थाह पाएको किरणको अनुभव छ ।
‘मैले जित्दा प्रमोदको टिमले जित्छ’
प्रमोदकै टिमबाट लाइभ राउन्डमा पुगेका रवि गहतराजसंग किरणको चर्को प्रतिस्पर्धा चल्यो । दुबै फाइनलमा पुग्न सक्ने भन्दै सामाजिक संजालमा बहस चलिरहँदा रवि बाहिरिन पुगे ।
‘यसमा मलाई पनि दुःख लागेको छ’, किरण भन्छन्, ‘बाहिर जस्तो चर्चा चलेपनि हामी धेरै मिल्ने साथी हौं । हामीबीच कहिल्यै कुनै समस्या भएन । अब मैले जित्दा रविले जितेको हुनेछ । मैले ट्रफी जिते भने त्यसको हकदार टिम प्रमोदका सोह्रै जना हुनेछन् ।’
किरणले विश्वभरका नेपालीबाट समर्थन पाएका अनुभव गरेका छन् । आफु पनि सबै नेपाली भाषीको आवाज र सपना बोकेर आएको यी भावूक स्वभावका गायकको भनाई छ । ‘देशले नै निकालिदिएको विरुवामा लागेको फल हुँ म’, उनी भन्छन्, ‘मलाई प्राप्त मायाका लागि सम्पुर्ण नेपाली भाषीप्रति हार्दिक आभार र खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
हरेकपटक गाउदा आफूमाथि रहेको विश्वभरका नेपालीको आशालाई निराशामा अनुवाद हुन दिनु हुदैन भन्ने सोच्ने गरेको किरण बताउँछन् । ‘मलाई अब नेपाली नागरिकता पाउँछु भन्ने आशा छैन’, उनी भन्छन्, ‘गाएर विश्वभरका नेपालीलाई जोड्न सकेँ भने त्यो पाए सरह हुनेछ ।’
भुटानका राजाले गोरखाका राजा राम शाहलाई भनेर नेपालीलाई भुटान लैजान थालेको इतिहास छ । कालान्तरमा नेपाली मूलका नागरिकहरुको प्रभाव बढ्दै गयो । नेपाली भाषीहरुले आप्mनो भाषा–संस्कृती, भेषभुषाको सम्बर्धन गर्दा भुटानी शासकहरुले ‘थ्रेट’ महसुस गरे । अनि झिके पोशाक र भाषा बिबाद ।
भुटान सरकारले गरेको ‘नेपालीपन निषेध’ नेपाली भाषीहरुको लागि मान्य हुने कुरै थिएन । त्यसपछि सुरु भयो दमन र रातारात देश निकाला । त्यसरी करिब एक लाख नेपालीभाषी भुटानी नागरिक पुर्वी नेपालको झापा र मोरंग जिल्लाका खोला किनार र गौचरनवासी बन्न वाध्य भए ।
हामीले सुरुमा भने जस्तै, किरण गजमेर हजारौ चोट र ताप सहेर बनेको एउटा धारिलो हतियार हो, जसको परख अहिले देशकै चर्चित ‘रियालिटी शो’मा भइरहेको छ । र, देश खोजिरहेको उनको आवाजले लक्ष भेट्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
कस्तो रमाइलो, विद्यालयमा गृहकार्य नगरेको बखत वा केही गल्ती–कमजोरी हुँदा उनलाई सजाय हुन्थ्यो, गीत गाउने । अर्थात् तारा श्रीष मगरले सजाय भुक्तान गर्न गीत गाउनुपर्ने ।
यस्तो सजाय नै उनको जीवनको धुन बनिदियो । उनी स्वर खिपेर गाउन थालिन् । तर, छोरी यसरी गीत–संगीतमा लहसिएको कुराले आमाबुवा खिन्न थिए । आखिर कुन गरिब आमा-बुवा मञ्जुर हुन्छन् छोराछोरी गिताङ्गे बनेर बरालिएको ?
गुजाराका लागि बुवा वैदेशिक रोजगारीमा थिए । उनका साथी–संगतीहरुले सुनाइदिएछन्, ‘तिम्रो छोरी त असाध्यै राम्रो भाका हालेर गाउँछिन् ।’ अब पो बुवाको मन पग्लियो । उनले छोरीलाई हौसला दिए । तर, बुवा अचानक पक्षघात भएर थलिए । परिवारको आड–भरोसा नै ओछ्यान परेपछि परिवारको बेहाल हुने नै भयो । ताराको अघिल्तिर दुःख र कष्टको चाङ थुप्रियो । रोगी बुवा स्याहार्नुपर्ने, भाइहरुको पालनपोषण गर्नुपर्ने, घरको चुल्हो बाल्नुपर्ने ।
आयआर्जनका लागि काम गर्नैपर्ने बाध्यता भयो । जानेको काम त्यही हो, गीत गाउने । पोखराका रात्रिकालिन बार, गजल रेष्टुरेन्टहरुमा गाउन थालिन् । विद्यालयबाट फर्केपछि भाइहरुलाई खाजा, नास्ता खुवायो । अनि दौडियो कामतिर । घर फर्कदा झन्डै मध्यरात भइसक्ने । छोरी मान्छे हुनुको पीडा ! छिमेकीहरु उनीमाथि शंकाको दृष्टि विच्छ्याउँथे ।
‘निकै गाह्रो भयो’ तारा ती दिनहरु सम्झिन्छिन्, ‘विद्यालयबाट फर्किएपछि साथीहरु खेल्न निस्कन्थे । म खाजा बनाएर भाइहरुलाई खुवाएर काममा निस्किनुपर्थ्यो । कामबाट फर्किँदा राति ११ बजिसक्थ्यो । छरछिमेकले राम्रो नजरले हेरिदिँदैनथे ।’
नेपाल टेलिभिजनबाट ‘भ्वाइस अफ टिन’ नामक सांगीतिक रियालिटी शो प्रशारणको तयारी थियो । पोष्टरहरु पोखराका भित्ताहरुमा टाँसिएका थिए । तारालाई सहभागी हुने रहर जाग्यो । परिवार, साथीभाइले सहभागी हुन सुझाव दिए । तारा त्यसमा भाग लिन काठमाडौं आएकी थिइन् । तर, उत्कृष्ट २५ बाट अगाडि आउन सकिनन् ।
सोही समयदेखि आफू गायिका बन्छु भन्ने अठोट लिएको तारा सुनाउँछिन् । त्यसमा अगाडि आउन नसके पनि उनले हरेश खाइनन् । पोखरामा लोकप्रिय गायन रियालिटी शो ‘बीग आइकन’मा भाग लिइन् । त्यसमा तारा उत्कृष्ट ४ मा पुग्न सफल भइन् । सोही समय अमित गुरुङको शब्द, संगीतमा ‘फूल सम्झे फूल तिमी’बोलको गीत गाउने अवसर पाएकी थिइन् ।
गजल रेष्टुरेन्ट, डान्सबारहरुमा गाउने, रियालिटी शोहरुमा भाग लिने, पढाइलाई निरन्तरता दिने क्रम चलिरहेको थियो । छोरीको संगीतप्रतिको लगाव र गायकीलाई बुवाले बुझिसकेका थिए । प्यारालाइसिसबाट थलिएका बुवाले एकदिन छोरीलाई भने, ‘संगीतमा राम्रो गर्ने हो भने पोखरामा बसेर हुँदैन । ठाउँमै गएर संघर्ष गर्नुपर्छ ।’
एकदिन ग्राहकका रुपमा मालिंगो गजल एण्ड वारमा पुगेकी थिइन् । सो निकै चलेको गजल एण्ड बार थियो । उनी आफूले ‘रिक्वेस्ट’ गरेर एउटा गीत गुनगुनाइन् । ‘त्यहाँ मेरो स्वर मन परेपछि कामको अफर गर्नुभयो’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि आर्थिक रुपमा केही सहज हुँदै गयो ।’ त्यहाँबाट आफूले संगीतसम्बन्धी धेरै ज्ञानहरु सिकेको समेत ताराले बताइन् ।
‘गाह्रो निकै थियो । अलिकति बिग्रेपनि गाली खाइन्थ्यो’ उनले अगाडि भनिन्, ‘तर त्यो गालीले गर्दा नै धेरै कुराहरु सिकेँ ।’ सोही समयमा उनले थुप्रै गीत रेकर्डिङका अवसरहरु पाइन् । ‘सर्भाइभ हुनका लागि पनि आएका गीतहरु गाएँ । तर, अधिकांश गीत लाइटमा आएनन्’ उनले सुनाइन् ।
चलचित्र, कौरा, सालैजो, गुरुङ, मगर भाषाका गीतहरु गरी ५ देखि ६ सयसम्म गीत रेकर्ड गराएको उनले बताइन् । त्यसमध्ये चलचित्र ‘शिरफूल’को शीर्षगीत लगायतका केही गीतलाई स्रोता एवं दर्शकले रुचाएका थिए ।
ताराले मालिंगो गजल एण्ड बारमा झण्डै चार वर्ष काम गरिन् । त्यसपछि सो गजल एण्ड बार बन्द भयो । अर्को गजल साँझमा काम गरिन् । नाम थियो, आलिसान गजल । तीन महिनाका कतार पनि पुगिन्, दोहोरी साँझमा गजल गायिकाका रुपमा । यो कोरोना महामारी आउनु केही अगाडिको कुरा थियो ।
बुवाको इच्छा पूरा गर्न ‘भ्वाइस’मा आएँ
गजल साँझमा गाइरहेकी थिइन् । कमाइ ठिकै भइरहेको थियो । परिवारले भनेको समयमा पैसा पठाउन सक्ने भएकी थिइन् । धेरै गीत गाए पनि चिनारी बनिसकेको थिएन । जुन कुराले उनलाई पिरोलिरहन्थ्यो ।
‘यति धेरै काम गर्यौ तर आफ्नो नाम पनि हुनुपर्यो । तिमीलाई भ्वाइस अफ नेपालको स्टेजमा हेर्ने ठूलो इच्छा छ’ एकदिन बुवाले भने ।
‘भ्वाइस अफ नेपाल’को दोस्रो सिजनमा सहभागी हुन पनि धेरैले आग्रह नगरेका होइनन् । तर, त्यतिबेला उनी आफैंलाई सहभागी हुन इच्छा लागेन ।
आज फोन आउला, भोलि आउला, धेरै दिन बित्यो तर फोन आएन । ‘आशा मारिसकेकी थिएँ । म छनोट भइनँ होला भन्ने सोचिसकेकी थिएँ’ उनले भनिन्, ‘२० दिनभन्दा पछि फोन आयो । निकै खुसी लाग्यो ।’
‘ब्ल्याइन्ड अडिसन’मा गाइन्, ‘तिमी नै हौ…’ । चारैजना कोचको मन जितिन् । चारै कोचहरु ‘टर्न’ गरे । आँखा चिम्लिन् र कोचमा राजु लामालाई रोजिन् ।
नसोचेको चर्चा पाएँ
जब तारा ‘भ्वाइस अफ नेपाल’मा प्रस्तुत हुन थालिन् । उनले सोचेकी थिइनन्, यात्रा यहाँसम्म आइपुग्ला भनेर । ब्याटल, नकआउट, लाइभ राउण्ड हुँदै उनी फाइनल राउण्डमा आइपुगेकी छिन् । त्यसमाथि ‘भ्वाइस अफ नेपाल’मा फाइनलमा पुग्ने पहिलो महिला बन्न सफल भएकी छिन् । यसले उनलाई थप खुसी मिलेको छ ।
स्रोता एव दर्शकको निकै माया पाएको तारा बताउँछिन् । ‘मैले सोचेकी थिइन् । यतिधेरै दर्शक–स्रोताहरुले मेरो स्वरलाई मन पराउनुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ भनेर । भ्वाइसबाट मैले नसोचेको नाम पाएकी छु’ उनी भन्छिन्, ‘त्यति धेरै गीत गाउँदा नपाएको चर्चा अहिले पाएँ । एकदमै खुुसी छु ।’ यस अगाडिको यात्राबारे थाहा छैन । तर, यहाँसम्म आउन सकेकोमा निकै सन्तुष्ट छिन् तारा । सायद, त्यो भन्दा खुसी होलान्, प्यारालाइसिसबाट थलिएका उनका बुवा ।
‘आप्पा’को सपना पुरा गर्न संगीतमा होमिएका आर्यन तामाङ
कक्षा १ मा पढ्दा नै आफ्नो आप्पाले संगीत सिकाउन पढाएपछि आर्यन तामाङ दुःखी भए । उनको संगीतमा लाग्ने चाहना फिटिक्कै थिएन । यसैले, संगीत अध्ययन गर्न जाँदा उनी कैयौं पटक रोए ।
उनका आप्पा दार्जिलिङका राम्रा कलाकार थिए । तर, दार्जिलिङ संगीतका लागि सानो बजार हुँदा आर्यनका आप्पाले आफूलाई ठूलो बजारमा चिनाउने मौका नै पाएनन् । सायद, उनको आप्पाको चाहना थियो, अब आर्यनले ठूलो बजारमा आफूलाई चिनाओस् । तर, म्यूजिकमा रुची नै नभएका आर्यनले सुरुमा दिक्क मानेका थिए ।
अहिले आएर आप्पाले सानोमै म्यूजिकको कोर्ष सिक्न पठाउनुको अर्थ आर्यनले वुझेका छन् । उनले भने–‘सायद, मेरो आप्पाले सानैमा मेरो प्रतिभा चिनेर संगीतको शिक्षा लिन मलाई पठाउनुभएको रहेछ । अहिले संझदा खुशी लाग्छ । तर, त्यो बेलामा भने म निक्कै रोएँ ।’
कक्षा ५ मा पुगेपछि भने आर्यनलाई आफू गाउनकै लागि जन्मिएको जस्तो लाग्न थाल्यो । स्कुलमा आयोजना भएको कार्यक्रममा जब उनले धेरै दर्शकमाझ आफ्नो स्वर सुनाए, नसोचेको माया पाए । आर्यनले यसपछि भने संगीतमा नै जीवन जिउने सपना बोके र अगाडि बढे ।
आर्यनसँग संगीतमा लाग्ने सपना त थियो तर स्टेज कम थिए । दार्जिलिङको सानो बजारबाट ठूलो बजारमा पुग्ने उनको चाहना पनि थियो । अवसर खोज्दै थिए उनी । कैयौं पटक उनी भारतका विभिन्न स्थानमा हुने रियालिटी शोमा पनि पुगे । तर, विशेषगरि नेपाली गीत गाउन नपाउने नियमको परिवन्धले उनलाई समस्यामा पारेको थियो ।
दार्जिलिङमा आयोजना भएको ‘दार्जिलिङ राइजिङ स्टार’मा उनी चौथो स्थान हासिल गर्न सफल भए । गुरु प्रदिप क्षेत्रीसँग संगीतको ज्ञान सिक्दै गर्दा उनले आफूलाई निखारेका थिए ।
आर्यनले ‘द भ्वाइस अफ नेपाल २’को बारेमा सुनेका थिए । तर, यो शोलाई फलो गरेपनि उनले सहभागी हुने हिम्मत भने गरेनन् । तेश्रो अडिसनको समयमा दार्जिलिङमा महामारीका कारण नेपाल बाहिरका प्रतिभाहरुले सहभागी हुन नपाउने भन्ने हल्ला चलेको रहेछ । तर, आर्यनले भने जे सुकै होस् भनेर शोका लागि अडिसन दिए । आयोजकले फोन गरेर बोलाएपछि भने आर्यनले जिन्दगीले नयाँ फड्को मार्न लागेको हो कि भन्ने आभाष गरे ।
टाइटल जित्ने रहर
आर्यन कोच दीप श्रेष्ठको टिमबाट अन्तिम ४ मा पुगेका छन् । आज हुने फाइनलले आर्यन र अन्य तीन प्रतिस्पर्धीमध्ये एक जनाको टाइटल जित्ने सपना पुरा गरिदिनेछ भने अन्य तिन जनाले फेरि नयाँ चिराबाट आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्नेछ । आर्यन भन्छन्–‘यहाँसम्म आउनु नै मेरो जित हो जस्तो लाग्छ । यो शोको प्लेटफर्ममा आएपछि गरिएका संघर्ष संझिएर मनमा धेरै कुराहरु खेलिरहेका छन् । यहाँसम्म आएपछि टाइटल जित्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त लागेको छ । तर, नहुन पनि सक्छ । म सबै कुराका लागि तयार छु ।’
आर्यन टप ४ मा आइपुग्दा आफूले दर्शक तथा श्रोताबाट अथाहा प्रेम पाएको सुनाउँछन् । टाइटल जितेपनि वा नजितेपनि आफूले संगीतलाई नै अगाडि बढाउने उनको सोच छ ।
सुरुमा त आर्यनले ‘ब्लाइन्ड अडिसन’ मात्र भएपनि पार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचेका थिए । तर, हरेक खुड्किलोमा पुग्दा त्यसलाई पनि पार गर्ने रहर उनमा पलाउथ्यो । लाइभ शोमा आएर पाएको मायाले भने आर्यन पुलकित छन् । फाइनलसम्म पुग्दा नै आर्यनले यो शो जितिसकेको महशुश गरेका छन् ।
दीप श्रेष्ठलाई नै कोच रोज्नुको कारण ?
आर्यनको दिमागमा सुरुमै दीप श्रेष्ठ थिए । भने–‘कोच दीप घुम्नु भयो भने उहाँलाई नै रोज्छु भन्ने सोचेको थिएँ । किनकी, उहाँ र मेरो संगीतको जनरा मिल्छ । म सेमी क्लासिकल गाइरहेको मानिस हुँ । मलाई दीप सरले अझै निखार्न सक्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो । यहाँ आएपछि थाहा पाए कि मसँग त संगीतको निकै कम ज्ञान रहेछ । दीप सरसँग मैले धेरै कुराहरु सिक्न पाएँ । यसका लागि त म आफूलाई भाग्यमानी नै ठान्छु ।’
आर्यन संगीतलाई मानिसले हरेक समयमा सुन्ने भएकाले पनि यो दुःख र सुख व्यक्त गर्ने माध्यम रहेको बताउँछन् ।
आर्यनको करिअर नै म्यूजिकमा बनाउने सपना छ । उनले आफू सानो उमेरको भएकाले पनि हरेक वर्गका दर्शकले रुचाएको बताए । दर्शक तथा श्रोताले दिएको यो मायालाई आफूले निराश नबनाउने वाचा गर्छन् उनी ।
दार्जिलिङको संगीतको बजार सानो भएकाले नेपालमै संगीतमा केही गर्ने इच्छा बोकेका यी ठिटो आफ्नो स्वरले दर्शक तथा श्रोताको मन छोएकाले पनि यति धेरै माया पाएको बताउँछन् । आफूलाई नेपालीहरुले कहिले पनि दार्जिलिङको भनेर पक्षपात नगरेको भन्दै उनले यो मायाका लागि सधै ऋणि रहेको बताए । अनलाईन खबरबाट